Nkọwa:ọkụ ahụ ọkụ, ọkụ ọkụ ọkụ, ìhè phototherapy,,,
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu Nlekọta Ọkụ
Ngwaahịa nke Egwuregwu Nlekọta Ọkụ , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, ọkụ ahụ ọkụ , ọkụ ọkụ ọkụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of ìhè phototherapy R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
660nm 850nm 180W uhie uhie ndu  Kpọtụrụ ugbu a
2019 Mma Ngwá Agha Ahụhụ 660-850nm Infra uhie 600W eduzi usoro ọgwụgwọ maka ọgwụ mgbochi ịkachasị ọrịa  Kpọtụrụ ugbu a
660nm 850nm 180W uhie uhie ndu
Ọnụahịa otu: USD 66.18 - 69.86 / Piece/Pieces
660nm 850nm 180W uhie uhie ndu Description: The low power 180W led light therapy device, covering the popular and effective 380nm . 670nm . 830nm absorption peaks with 60pcs 3W chips of precise wavelength ranges. Can improve the effects of soreness,...
2019 Mma Ngwá Agha Ahụhụ 660-850nm Infra uhie 600W eduzi usoro ọgwụgwọ maka ọgwụ mgbochi ịkachasị ọrịa
Ọnụahịa otu: USD 255.68 - 274.62 / Piece/Pieces
2019 Mma Ngwá Agha Ahụhụ 660-850nm Infra uhie 600W eduzi usoro ọgwụgwọ maka ọgwụ mgbochi ịkachasị ọrịa Description: The low power 600W led light therapy device, covering the popular and effective 380nm . 670nm . 830nm absorption peaks with 60pcs 10W...
China Egwuregwu Nlekọta Ọkụ Ngwa
Igwe ọkụ ọkụ na-ekpuchi ọkụ (LED) na-eto eto n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọdịdị na nke ụlọ. Site n'iji okpukpu uhie di iche iche, nke a na-enye aka na-enyere aka aka, belata mmetụ, ma kwalite mmegide na-eme agadi.
Ị nwere ike ịbụ onye na-eme maka ọgwụ ọkụ ọkụ ma ọ bụrụ na ịnwere ụdị nchekasị anụ ahụ ma ghara inweta ihe ị ga-achọ site na ngwaahịa oTC (OTC). Ọrịa na-acha ọkụ ọkụ dịkwa mma maka akpụkpọ anụ niile, ọ dịghịkwa akpata ihe ọ bụla ọkụ.
Ma, e nwere obere njide. Maka otu, ọgwụ ntanaka nwere ike ịdị oké ọnụ, ọ nweghịkwa ihe ga-esi na ya pụta. Ọ naghị adị mma ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ụfọdụ ma ọ bụ nwee nsogbu akpụkpọ anụ.
Gwa onye na-ahụ maka ọgwụ banyere gị banyere nchegbu anụ ahụ gị na ma ọkụ ọkụ ọkụ bụ nhọrọ dị mma maka gị.
ọkụ ahụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ìhè phototherapy